Nin Soomaali Ah Oo La Dhaariyey Hogaanka Xaafadda Lixaad Ee Minneapolis, USA – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Nin Soomaali Ah Oo La Dhaariyey Hogaanka Xaafadda Lixaad Ee Minneapolis, USA
A warsame 7 January 2014 4 April 2019
Minneapolis, Mareeg.com: Munaasabad balaaran oo lagu dhaariyey islamarkaana ay xilka si toos ah ula wareegeen duqa magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka iyo gudoomiyayaasha degmooyinka ayaa ka dhacday xarunta madaxtooyada magaaladaasi.
Nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Cabdi Warsame oo dhawaan loo doortay gudoomiyaha degmada 6-aad ee magaalada Minneapolis ayaa ka mid ahaa maas’uuliyiinta la dhaariyey.
Munaasabadaan ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda ugu saraysa gobolka Minnesota iyo dalka Mareekanka, siyaasiyiin, culumo, iyo waliba jaaliyada balaaran ee Somaaliyeed oo si weyn uga muuqatay.
Somaalida ku dhaqan magaalada Minneapolis ayaa soo buux dhaafiyey goobta munaasabaddu ka dhaceysay, waxaana goobtaasi lagu dhaariyey Maayarka cusub ee magaalada Minneapolis Betsy Hodges iyo gudoomiyayaasha degmooyinka magaalada Minneapolis.
Cabdi Warsame oo ah shaqsigii u horeeyey Muslim oo gudoomiye degmo ka noqda magaalada Minneapolis ayaa goobtaasi ka dhexmuuqday, isagoo ku labisan Shaal iyo Koofiyad Somaali. Culumaa’udiinka gobolka oo marti qaad ka helay Abdi Warsame ayaa sidoo kale ka muuqday safka hore ee munaasabadaasi, iyagoona muujiyey kalsooni iyo farxad aan abid horay loo arag.
Cabdi Warsame oo la hadlay saxaafada Somaalida iyo kuwa caalamiga ah ee dalka Mareekanka ayaa u mahadnaqay dadwaynaha doortay islamarkaana sharaxay agendahiisi 4-ta sano soo socoto. “Amaanka, hormarinta degaanka iyo shaqo abuuris ayaa ahmiyadeedi koowaad ah,” ayuu yiri Cabdi Warsame xilli uu u waramaayey saxaafada.
Sheikh C/qani Qardhawi oo kamid ah culumaa’udiinka ugu waa’weyn magaalada Minneapolis oo la hadlay saxaafada ayaa yiri; “Labiska Cabdi Warsame uu munaasabadasi u xirtay ayaa fariin u diraysa siyaasiyiinta Somaalida inay maqaam sare gaari karaan iyagoo aan ka tagayn dhaqankooda.”
Gudoomiyayaasha degmooyinka Minneapolis ayaa shalay u fadhiistay kala fadhigii u horeeyey sanadkaan 2014, iyagoona u doortay madaxweyne, Barb Johnson.
Somalia: Election Committee In Puntland announces official list of presidential candidates
Muqdisho: Haweeney Toogasho Ku Dishay Ninkeeda Oo Ka Tirsaan Nabad Sugidda